Wakiilkii Somaliland u fadhiyay Dalka Faransiiska oo geeriyooday | Somaliland.Org
December 27, 2009	Hargeysa (Somaliland.Org)- Wakiilkii Somaliland u fadhiyay Dalka Faransiiska Maxamed Saalax Nuur (Fagadhe) oo muddooyinkanba dalkaas ku xanuunsanayay, ayaa shalay ku geeriyooday Cusbatal ku yaala Magaalada Paris.
Allaha u naxariistee Marxuum Maxamed Saalax Nuur (Fagadhe) ooh ore u ahaan jiray Wasiirkii arrimaha dibedda ee Somaliland, isla markaana ka hor intii aan xilkan Wakiilnimo aanu qaban ka mid ahaa Madaxda Xisbiga KULMIYE, ayaa in muddo ahba xannuun u jiifay Cusbatal ku yaala Magaalada Paris.
Sida uu toddobaadkan sheegay Wasiir-ku-xigeenka Wasaaradda Arrimaha Dibedda Axmed Aadan Ismaaciil, Wasaaraddaas ayaa xilkan si ku-meel-gaadh ah uga wareejisay Marxuumka intii aanu geeriyoon, isla markaana waxay xilkaas u dhiibeen Madaxa Xafiiska Ganacsi ee Somaliland.
Madaxweyne Rayaale iyo Madaxda Axsaabta Mucaaradka, ayaa tacsi u diray guud ahaan Shacabka Somaliland, gaar ahaan ehelkii iyo qaraabadii uu ka baxay Marxuum Fagadhe. Waxaanay Ilaahay uga baryeen in uu naxariistii janno ka waraabiyo.